ဆယ်လီဗြစ်တီ မောင်ဝါဝါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဆယ်လီဗြစ်တီ မောင်ဝါဝါ
Posted by သူရဿဝါ on Oct 19, 2012 in Aha! Jokes, Satire |2comments
ကျွန်ုပ်သည်ကား မြန်မာ့ အသံ၊ မြဝတီ၊ ချန်နယ် ဆဲဗင်း၊ အမ်မာတီဗွီ-ဖော အစရှိသည့် ရုပ်မြင် သံကြား လိုင်းပေါင်းစုံမှ ပြုလုပ်သမျှ အဆို ပြိုင်ပွဲ၊ အက ပြိုင်ပွဲ၊ အဆော့ ပြိုင်ပွဲ၊ ဥာဏ်ကြီးရှင် ပြိုင်ပွဲ၊ မူကြိုနှင့်ပြိုင် ဘယ်သူမှ မနိုင် အစရှိသည့် ပြိုင်ပွဲ ပေါင်းစုံကို အားအား ယားယား ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ပြီး သကာလ ပြိုင်ပွဲတိုင်း အနိုင် ရရှိကာ မြန်ပြည် တလွှား အမည် ကျော်ကြားကာ သောက်ကျိုးနဲ နာမည်ကြီး လာတော့ လေရာ ကျွန်ုပ်အား ချစ်ခင် အားပေး ကြသော ကောင်မလေး များ အွန်လိုင်း၊ အော့ဖ်လိုင်း နှစ်လိုင်း စလုံးတွင် ဝိုင်းဝိုင်းလည် လျက် ရှိနေ သည်သာ ဖြစ်၍ လိုင်းပေါင်းစုံ မထသပင် အရှုံး ပေးရလောက်သည့် အဖက်ဖက် ချွန်သော ဆယ်လီဗြစ်တီ မောင်ဝါဝါ အမည်တွင်လျက် ရှိနေလေ တော့သည် တကား။
အထက်တွင် ပြောခဲ့သည့် အတိုင်း ကျွန်ုပ်၏ ပရိသတ် အများစုမှာ သည်းသည်းလှုပ် မိန်းကလေးများ ဖြစ်ကြသည့် အပြင် များစွာသော ပရိသတ် တို့မှာ အော့ဖ်လိုင်းထက် အွန်လိုင်းတွင် ပို၍ စုရုံး အားပေး ကြသည် ဖြစ်လေ၏။ ကျွန်ုပ်၏ ပြင်ပ လူနေမှု ဘဝတွင် ရှိသော ပရိသတ်မှာ အလွန်တရာ များလှသည် မဆိုနိုင် သော်လည်း အွန်လိုင်းရှိ ဖေ့စဘုတ် ခေါ်သော လူမှု ကွန်ယက် ဝက်ဘ်ဆိုက် အတွင်း၌ ကျွန်ုပ်ပင် မသိ လိုက်သည့် အချိန်ကလေး အတွင်းမှာပင် ဆယ်လီဗြစ်တီ မောင်ဝါဝါ၏ ဖန်ပေ့ခ်ျကို အားပေးသူ ပရိသတ် အပေါင်း သိန်းပေါင်း လေးသောင်း ငါးထောင်ခန့် ရှိလေသည် ဟူ၍ အားတက် ဖွယ်ရာ သတင်း တစ်ခု ရရှိခဲ့ လေ၏။ သို့နှင့် ကျွန်ုပ် ဆယ်လီဗြစ်တီ မောင်ဝါဝါ လည်း ပရိသတ် အပေါင်း မည်သို့ အားပေး ကြမည့် အကြောင်းကို နှိုက်နှိုက် ချွတ်ချွတ် သိလို လှသည် ဖြစ်သဖြင့် အဆိုပါ ဖေ့စဘုတ် အတွင်းရှိ ကျွန်ုပ်၏ ဖန်ပေ့ခ်ျ အတွင်းသို့ ဝင်ရောက် စပ်စု မိလေသည် ဖြစ်ချေ၏။
အဆိုပါ ဖန်ပေ့ခ်ျ၏ နာမည်ကို မြင်ကတည်း ကပင် မောင်ဝါဝါမှာ ကြက်သီး မွေးညင်းများ ထသည် အထိ အံ့အား သင့်ရ လေတော့၏။ ပရိသတ်များ အမည်တပ် ထားသော ဖန်ပေ့ခ်ျ အမည်မှာ “မောင်ဝါဝါအား အသေရရ အရှင်ရရ လိုချင်သူများ အဖွဲ့” ဟူ၍ ဖြစ်လေ၏။ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု မိလေသော အခါတွင်မှ ကျွန်ုပ် ဆယ်လီဗြစ်တီ မောင်ဝါဝါမှာ အံ့သြ တုန်လှုပ် ရတော့သည် ဖြစ်လေ၏။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် မောင်ဝါဝါပင် မသိသော ဖန်ပေ့ခ်ျ အတွင်း၌ မောင်ဝါဝါ၏ အကြောင်းကို မသိသော ပရိသတ် တို့မှာ မောင်ဝါဝါနှင့် နို့စို့ဖက် ငယ်ပေါင်း ကြီးဖော်များ အလား မောင်ဝါဝါ၏ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် အချစ်ရေး ကိစ္စ တို့ကို ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် ပြောဆို နေကြ လေသည် ဖြစ်လေ၏။ ထိုထက် ပို၍ အံ့သြ ဖွယ်ရာ ကိစ္စမှာ ၄င်းတို့ ပြောဆို သမျှ တို့မှာလည်း မောင်ဝါဝါ၏ ပြင်ပ အခြေအနေနှင့် ကွာချင်တိုင်း ကွာခြား၍ နေသည်သာ ဖြစ်လေ၏။
“မောင်ဝါဝါက ဝင်ဒါမီယာ ရွှေတောင်ကြား ထဲမှာ သုံးဆယ့် ခြောက်ထပ် တိုက်နဲ့ နေတာ ဆိုပဲဟေ့” ဟူသည်က တစ်ဖုံ၊
“မောင်ဝါဝါ လက်ရှိ ကိုင်နေတာ ဖုန်းအလုံး သုံးဆယ် တစ်ပြိုင်တည်း ဆိုပဲ၊ တစ်လုံးမှလည်း ခေါ်မရဘူး၊ ပိတ်ထားတာ” ဆိုသည်က တစ်မျိုး၊
“မောင်ဝါဝါနဲ့ ဟိုမင်းသမီး ပေါက်စ လေးနဲ့က ချိတ်တိတ်တိတ်၊ ဒီမော်ဒယ် လေးနဲ့က ကလိတိတိ ဖြစ်နေ ကြတာ ဆိုပဲ .. သူ အဆုံးသတ် ဘယ်သူ့ကို ရွေးမလဲ မသိဘူးနော်” ဆိုသည်က တစ်ပါး .. မှားချင်တိုင်း မှား၍ နေကြသည် ဖြစ်လေ၏။
တကယ့် တကယ် တွင်တော့ မောင်ဝါဝါမှာ ပြိုင်ပွဲ ပေါင်းစုံ ဝင်ပြိုင် မိသည့် သကာလ ဖောင်ဖိုး၊ လမ်းစားရိတ်၊ ထမင်း စားရိတ် စသဖြင့် ထောင်းလမောင်း ကြေအောင် သုံးစွဲ မိလေရာ ယခုအခါ မောင်ဝါဝါ၏ အိမ်မှလည်း မောင်ဝါဝါ့ ဒဏ်ကို မခံနိုင် တော့သည် ဖြစ်သဖြင့် အိမ်မှပင် နှင်ချ ထားလေရာ မောင်ဝါဝါမှာ အဝတ်တစ်ထည် .. ကိုယ်ဝန်တစ်ခု . အဲလေ .. အဝတ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုနှင့် သူငယ်ချင်း အိမ်၌ပင် ကပ်နေရ လေသည် ဖြစ်သဖြင့် ၄င်းတို့ ပြောသည့် ဝင်ဒါမီယာ တွေ၊ ထွက်ဒါမီယာ တွေတွင် သုံးဆယ့် ခြောက်ထပ် တိုက်နှင့် နေသည် ဆိုသည်မှာ မောင်ဝါဝါ အဖို့ အူတက် မတတ် ရယ်စရာ ကိစ္စပင် ဖြစ်၍ နေလေ၏။
လက်ကိုင်ဖုန်း အလုံး သုံးဆယ် မပြောနှင့် .. မောင်ဝါဝါမှာ ကယ်ကူလေတာ အစုတ်ပင် မဝယ်နိုင်သူ ဖြစ်လေရာ ဤသည်မှာလည်း မှား၍ နေလေသည် ဖြစ်လေ၏။ မောင်ဝါဝါ၏ ရုပ်ရည် ရူပကာ မှာလည်း ချင်ပန်ဇီပင် အိုပါး ခေါ်ရလောက်အောင် အသားမည်း၊ သွားကျဲ၊ နဖူးပြောင်၊ ဒူးချောင်၊ ရင်မောက်၊ တင်ကောက် ဖြစ်၍ နေသည် ဖြစ်သဖြင့် သူတို့ ပြောသလို မော်ဒယ်တွေ၊ မင်းသမီး တွေနှင့် ဇာတ်လမ်း ဖြစ်ဖို့ ဝေးစွ .. လမ်းထိပ်ရှိ မောင်ဝါဝါ ကြိုက်သော ကွမ်းယာသည် ကလေး မိဝင်း ကိုပင် ကွမ်းယာကြွေး မပေးနိုင် သေးသဖြင့် ရှောင်နေရ သည်နှင့် ဆက်၍ မပိုးနိုင် ဖြစ်နေ သော ဘဝကို ရောက်နေ လေရာ ဖန်ပေ့ခ်ျ အတွင်းရှိ ပရိသတ်များ ပြောဆို သမျှမှာ မအူပင် ကလပ်နှင့် ဂျူဗင်တပ် ကဲ့သို့ မှားချင်တိုင်း မှား၍ နေသည် ဖြစ်လေ၏။ ထို့ပြင် တဝ ဖန်ပေ့ခ်ျ အတွင်း၌ မောင်ဝါဝါကို အားပေး ထားကြသည့် စာများ မှာလည်း အလွန်တရာမှ ထူးခြား ပြောင်မြောက် လှသည် ဖြစ်လေရာ တချို့ တဝက်မှာ အောက်ပါ အတိုင်းပင် ဖြစ်လေ၏။
“မောင်ဝါဝါ ပြုံးတာက ပြီတီတီနဲ့ အသည်းယား စရာ .. တကယ့် ကြာကူလီကို ငါးရံ့ နှုတ်ခမ်းမွှေး တပ်ပေး ထားသလိုပဲနော် အဟိ အဟိ ခွိ”
“မောင်ဝါဝါ အကြိုက်ဆုံး အပျင်းပြေ သွားရေစာက လေမျိုးရှစ်ဆယ် လျက်ဆားတဲ့တော့ … သူ့အိမ်ကို ဖုန်းဆက် မေးလိုက်တာ .. တို့နဲ့ အကြိုက်ချင်း တူလိုက်တာ ဟယ် .. ခစ်ခစ်”
“ဟိုပြိုင်ပွဲမှာ မောင်ဝါဝါ ဆိုသွားတဲ့ သီချင်းလေးလေ အခုထိ နားထဲကကို မထွက်ဘူး .. မူရင်း အဆိုတော်တောင် မောင်ဝါဝါ လောက် သံသေးသံကြောင် မဆိုနိုင်ဘူးနော်”
“မရဘူး မရဘူး .. တို့ကတော့ ချစ်မှာပဲ .. မောင်ဝါဝါ့မှာ မိန်းမပဲ ရှိရှိ၊ ကလေးပဲ ရှိရှိ .. အို .. ယောကျာ်းပဲ ရှိရှိ ချစ်မှာ ..”
“ဟေ့ .. ကိုယ့်ဟာကိုယ် ချစ်စရာ ကောင်းလို့ မောင်ဝါဝါ့ကို ချစ်တာ .. မနာလို အတင်းပြောတဲ့ လူတွေက ရှိသေးတယ် .. ဘာဖြစ်သတုန်း .. ဒီမယ် .. မောင်ဝါဝါ့ကိုထိ ပိကျိပဲဟဲ့”
ထိုသို့ဖြင့် မောင်ဝါဝါမှာ အွန်လိုင်းတွင် ဖေ့ဘုတ်ကြီး တစ်ခုလုံး တစ်စစီ ကြေမွ သွားမတတ် သည်းသည်းလှုပ် အားပေး ချစ်ခင် ကြသော မိန်းကလေး ပရိသတ် အပေါင်းကို ကြည့်ကာ ကြက်သီး လည်းထ၊ အားလည်း ရ၍ ဝမ်းသာ မိသည် ဖြစ်သော်လည်း အပြင်သို့ ထွက်၍ တွေ့လိုက်လျှင် “အသေရရ အရှင်ရရ လိုချင်သူများ အဖွဲ့” ဟု ဆိုသည့် အတိုင်း မောင်ဝါဝါအား ရသည့် နေရာမှ၊ ရသလို ဝိုင်းဝန်း ဆွဲလွဲ အဖြစ်သည်း ကြမည့် ဘေးကို တွေးကာ တစ်စစီ ကျိုးပဲ့ကုန်ပြီ ဖြစ်သွားမည် စိုးသဖြင့် အပြင် မထွက်ရဲ၊ အွန်လိုင်း မတက်ရဲ ဖြစ်ကာ ရေသောက် ဗိုက်မှောက်၍ အိမ်ထဲ ၌ပင် ဖျာလိပ် ပတ်၍ ပုန်းရှောင် နေရသည့် အဖြစ်ကို ရောက်ရှိ သွားသည် ဖြစ်လေ သတည်း။
၅ – အောက်တိုဘာ – ၂၀၁၂
Volume (2), Issue (56)
မသေမရှင်ရချင်တဲ့အဖွဲ့ လေးပါထည့်လိုက်ပါလား ………
ကိုယ့်လူတို့ ကတော့ ကြံကြံဖန်ဖန် တွေးတတ် ရေးတတ်တယ်ဗျာ.. ဖေ့ဘုတ်မှာ အမြင်ကတ်စရာကောင်းလောက်အောင် ၊ မျက်စိအရမ်းနောက်စရာ ချစ်သူများအဖွဲ့တွေ ကို ဆော်ပုံလေးက ရယ်ရသဗျို့ .. ဗြဲ